Qaabka loo diiwaan galiyo Website
Qaabkee loo Diiwaan galiyaa website?
Wq. Mahamoud Mahamed Yusuf. Email address :xuuto_2005@hotmail.com
Ugu horayn fadlan xusuusnow akhriste in qoraalka hoose yahay aragtida webmasterka somalitalk.com mahamed
Hadaan u soo laabto jawaabta ugu horayn waxa la gudboon qofka diiwaangelinaya bog in uu cilmi baadhis ku sameeyo waxa uu ka damacsan yahay boga, iyo xadiga ama baaxadda uu karbo in bogaasi xamilikaro. waxa halkaas ugu jeedaa in qofku ogaado inta akhbaar ah ee uu u baahan yahay in uu ku xerayn doono boggaas. tusaale ahaan
Ma waxaad rabtaa 10MB 20MB 40MB mase 100MB . Adiga ayaa ogxadiga aad rabtid, waana meesha ugu horaya ee aad ka bilaabysid sidii aad ku hanan lahayd bog adiga kuu gaar ah. Taad marka aad meel ku soo ogaatid, maxaa ku xiga?
Waa in aad ogaataa magaca aad rabtid in aad bogaas u bixisid, ma waxaad rabtaa in aad ugu magacdartid shirkadaada, mase waxaad rabtaa in aad u bixisid magac kale, waa mid aad adigu go'aamin kartid taasina, balse cilmi baadhis u baahan adigoo meelo badan arinta ka eegaya, waxayna inta badan ku xidhan tahay magac bixintu arinta aad ka damacsan tahay in aad bogaas ku samaysid.
Taas marka aad meel ku soo ogaatid, maxaa haboon in aad ku dhaqaaqdid?.
Waa in aad ogaataa in la qaatay magaca aad u bixinaysid bogaaga iyo in kale, waayo waxaaba dhici karta in magacaasi horay shirkad kale ama qof kale u qaatay, weydhacdaa taasi marar badan. si aad arintaa u xaqiijiso soo booqo boga baadhista cinwaanada., Marka aad arintaas soo ogaatid, waxaa haboon in aad bilowdid qaabkii diiwaan gelinta bogaas.
Ugu horayn waa in aad ogaataa labo arimood oo ah.
Host (oo ah meesha ama khaanada aad ku xarayn doontid akhbaarta dunida oo dhami arki doonto)
Web REGISTRATION (oo ah meesha diiwaangalinta bog kasoo baxa shaashada shabakada Internetka)
"Host" ama aan ugu yeeree "Khaanada Internetka" waa tan ugu muhiimsan go'aanka aad kagaareysid inta aadan diiwaangelin. waayo? Waa meesha aad ku kaydin doontid macluumaadkaaga, isla mar ahaantaana waa meesha ay akhristayaasha kahelidoonaanqoraaladii aad daabacday.
Waxa jira shirkado badan oo aad ka samaysan kartid hosting ka, halkan booqo.
Taas marka aad xalisid ama go'aan ka gaartid, talaabada xigtaa waa in aad diiwaan gelisaa bogga.
Waa xarumaha diiwaanka ee bogga, la'aantoodna bogga magelayo shabakada internetka, waxayna leeyihiin waqti ay tahay in aad lacagta bixisid hadii kale bogii hawada ayuu kabaxayaa. badanaa waxay diiwaanka kuu haynayaan ugu yaraan halsano iyo wixii ka badan. Qiyaastii sannadkii waxaa labixiyaa $35 doolaar USA.
Meelaha aan filayo in ay ugu macquulsanyihiin diwaangelinta waxaa ka mida:
Ka soo qaad in aadan intaas oo dhanba awoodin oo aad doonaysid in aad bog interetka ka samaysatid. waxaa aad bog bilaash ah ka furan kartaa www.tripod.lycos.com Runtii aad ayay u fududahay sida loo samaystaa.
Waxa iga talo ah in aad ka taxadirtid qoraalka aad internetka u gudbinaysid.
Fadlan halkan ka baro HTML.